Nchịkọta Google na-ebupụta Data Studio (Beta) | Martech Zone
Google Analytics amalitela Data Studio, enyi nchịkọta maka akụkọ ụlọ na dashboard.
Google Studio Studio (beta) na-enye ihe niile ịchọrọ iji gbanwee data gị ka ọ bụrụ akụkọ mara mma, nke na-enye nkọwa dị mfe ọgụgụ, dị mfe ịkekọrịta, yana ịhazi ya nke ọma. Data Studio na-enye gị ohere ịmepụta ihe ruru akụkọ akụkọ 5 nwere nhazi na ịkekọrịta na-akparaghị ókè. Ihe niile n'efu - ugbu a naanị na US
Google Data Studio bu ihe ohuru data ngosipụta Ngwaahịa na-ejikọ data n'ofe ọtụtụ ngwaahịa Google na isi mmalite data ndị ọzọ - na-eme ka ọ bụrụ ihe mara mma, mkparịta ụka mmekọrịta na dashboards site na mmekọrịta oge. Nke a bụ akụkọ nlele ahịa:
Anyị achọpụtala ụfọdụ ngwaọrụ dị egwu nke jikọtara na Google Analytics iji wuo akụkọ mara mma, dịka Wordsmith maka ahia, ikpo okwu wuru maka ụlọ ọrụ iji nyochaa, dezie ma zipụ nhọrọ ọkọlọtọ nke akụkọ Google Analytics na ndị ahịa ha. Nke a gosipụtara ịsọ mpi isi na isi, na-enyere aka ịhazi akụkọ nke enwere ike ịkekọrịta n'ụzọ dị mfe.
Na-enweghị ngwa ọrụ, ndị ọrụ nchịkọta na-ebubata data ahụ wee kanye ya n'ime mpempe akwụkwọ iji mepụta akụkọ tozuru etozu. Google Studio Studio meriri nke a, na-enye nnweta oge dị adị ma dị ike ma dị ike.
Njirimara nke Google Data Studio:
Jikọọ na Nchịkọta Google, AdWords na ihe omuma data ndi ozo di nfe.
Chọọ data site na akaụntụ na nyocha dị iche iche na otu akụkọ.
Hazie ọmarịcha, akụkọ ahaziri maka ọdịdị na mmetụta nke nzukọ gị.
Share naanị data ịchọrọ ịkọrọ ndị mmadụ ma ọ bụ ndị ọrụ dị iche iche.
Ka ọ dị ugbu a, beta na-emeghe naanị Njirimara United States.
Gbalịa Google Studio Studio
Tags: data nchịkọtanyocha data nyochagoogle adwordsgoogle ngosi ihe ngosi data adwords googlegoogle adwords na-akukoGoogle Analyticsgoogle data nchịkọta datadata googlegoogle data studionyocha data googleWordsmith maka ahia
mara mma nke ukwuu. Ihe ọ bụla ọzọ pụrụ iche ma ọ bụ kwalite.